Afaan Oromoo : Oromo Democratic Front
Ibsa ADO mana hidhaa Qilinto ilaalchisee
Posted by ODF on September 6, 2016 · Leave a Comment
Hagayya 5, 2016 Erga manni hidhaa naannoo magaalaa Finfinneetti argamu kan matootiin hoogganaa bebbeekamoon akka Obbo Baqqalaa Garbaafaa keessatti argaman gubatee kunoo ar’a guyyaan sadi darbeera. Haa ta’u malee mootummaan Itiyoophiyaa haala hidhamtooti kun keessa jiran maatii fi firoota isaanii waa takkallee hin hubachiisin jira. Haa du’an haa jiraatan kana jedhee waan hime hin qabu. Haalli biyya sana keessa jiru yeroo kam irra gar-malee hammaachaa jira. Diddaa uummataa ukkaamsuuf namoota kumaa ol ta’an ajjeesuu fi kumaatamaan kan lakkaawaman hidhuun, qabsoo fi mormii cimsaa, haala nageenya biyyattii ammo dukkaneessaa jira. Egereen mootummaa biyyattiis qarqara badiinsaarra waan gahe fakkaata. Mootummichi ibsa baasuu…
Haala ammatti Ethiopia keessatti mul’achaa jiru ilaalchisee Ibsa Koree Gidduu ADO
Posted by ODF on August 15, 2016 · Leave a Comment
Haala ammatti Ethiopia keessatti mul’achaa jiru ilaalchisee Ibsa Koree Gidduu Adda Demokraatawaa Oromoo Teessumni Koreen gidduu Adda Demokraatawaa Oromoo/ADO Hagayya 1-2 bara 2016ti gaggeeffame. Teessuma Koree Gidduu ADO isa ammaa kana kan adda taasisu ummanni Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti baatii salgan darbaniif fincilaa fi mormii mootummaa abbaa Irree Ethiopia irratti gaggeessaa ture yeroo kamuu caalaa jabinaa fi gootummaan yeroo itti finiinsaa jiru keessatti gaggeeffamuu isaati. Koreen Gidduu Adda Demokraatawaa Oromoo; Ummanni Oromoo, dorsisa mootummaa fi tarkaanfii sukkaneessaa waraanni mootummichaa irratti raawwachaa jiru dura dhaabbachuun qabsoo karaa nagaan fincila gaggeessaa jiru sadarkaa ol anaarra geessisuu isaa fi ummanni Ethiopia biroonis fakkeenyummaa…
Haala Yeroo Ammaa Itiyoophiyaa Keessa Jiru Ilaalchisee Labsa ADO
Posted by ODF on February 23, 2016 · Leave a Comment
Haala Yeroo Ammaa Itiyoophiyaa keessa jiru ilaalchisee labsa ADO Guraandhala 17, 2016 Koreen Hojii Raw’achiiftuu Adda Demokraatawaa Oromo (ADO), baatii sadeen dabran kana keessa sochii fi halleen Oromiyaa keessatti deemaa jiru gadi-fageenyaan xinxaluun erga irratti mari’atee booda toftaa fi tattaafiin Wayyaaneen aangoo ishee bakka duriitti deebifachuuf carraaqaa jirttu kan fashalee fi bu’a-dhabeessa ta’uu isaa mirkaneessee jira. Qabsoo ummanni Oromoo hidhannoo-malee fincilaa fi diddaan geggeessaa jiru ADOn ni deggera; mamii tokko malee bira dhaabbatas. Haa ta’u malee cunqursaa fi hacuuccaan gosa kamiiyyuu ummata Oromomoo harka kennisiisee diinaaf gadi-galoo akka hin taasifne hubatamuu qaba. Ummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa deebifachuuf, biyya guutuu…
ADO – Dhaamssa bara Haarayaa 2016
Posted by ODF on December 31, 2015 · Leave a Comment
BAGA BARA HAARAYAATTI CEENE! Yeroon amma kun seena ummataa Oromoo keessati yeroo kamu caalaa ka ummani keenya itti ajjeefamaa jiru fi dararamaa jiru dha. Yeroo kana keessati baga bara haarayaan si gahe fi baga gammade isiniin hin jennu; yeroo kun ka gammachuu waliif hawwaan mitti. Lammiiwwan keenyaatu ajjeefamaa jira, dhala Oromootu hidhaatti guuramaa jira, heegaree saba keenyaatu dararamaa jira; jijjiirama baraa ayyaaneffachuun nutti hadhaawaa jira. Akkasis ta’ee, “Baga bara haaraatti tarkaanfanne” waliin jechuun karaa dha. Amma barri 2015 dhumatee, barri 2016 jalqabaa jira. Yeroo akkasii waan bara dabre keessa turre of duuba mil’achuun barbaachisaa ta’a. Sana irraa ka’uudhaan waan bara…
Ibsa Ejjannoo ADO Ajjeechaa Ilmaan Oromoo irratti Raawwatamaa Jiru Ilaalchisee!
Posted by ODF on December 18, 2015 · Leave a Comment
Torbaan afuran dabran keessa mootummaa EPRDF fi ummata Oromoo giddutti walitti bu’iinsi hamaan godhamaa jira. Sababaan sochii Oromootaa kunis Karooraa Guddicha magaalaa Finfinneetii fi magaalota ollaa isiitti argaman walitti qindeessuuf (Masterplan) jedhu labsuu hundee taasifate. Karoorri jedhame kunis magaalaa Finfinnee badhisuuf jecha qonnaan bulaa Oromoo lafa isaa irraa buqqisuuf kan akeekkate tawuun hubatame. Yaaddoo kanarraa ka’uun barattootaa fi ummanni baldhaan Oromoo biyya guutuu keessatti hiriira nagayaa godhuu jalqaban. Mormiin Oromoon karaa nagayaatiin godhaa jiru kunis hariiroo xaxaa seenaa dheeraatii fi bara as aanaa kanas hamaataa deeme kan Saba Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru agarsiisa. Sochiin kun dhugaan muldhise yoo…
Sagantaa Siyaasaa ADO
Posted by ODF on September 22, 2013 · Leave a Comment
SEENSA SAGANTAA SIYAASAA ADDA DEMOOKRAATAWAA OROMOO (ADO) Itoophiyaan erga dhuma jaarraa 19ffaatti, lola gabroomsaa fi gara-jabeessa mootummaa Menikin geggeefamen, akka biyyaatti ijaaramtee jalqabdee mana hidhaa fi dararama sabootaa, sab-lamootaa fi ummataa ti. Hidhamtoota kanneen keessaa Oromoon saba tokko. Weerarri gabroomsaa Minilikin geggeessame kunis duguuggaa sanyii ummata biyyichaa irraan gahuu bira dabre lubbuu hedduu beelaa fi dhukkubaan galaafatee. Balaa lola kanarraa maddeen Oromoon bilisummaa dhabee, abbaa biyyummaa sarbamee, qabeenya isaa saamamee sadarkkaa gabrichaatti (faanshotti) gadi bu’uu bira lufee (serfs) sirna jibbamaa gabbaarummaa (gabbar system) jalatti kufe. Oromoon yeroo sana irraa eegalee bilisummaa fi kabajaa eenyummaa isaa deebisee gonffachuudhaaf lola walirraa hincitne…
Posted by ODF on April 20, 2013 · Leave a Comment
Nuti, miseensonni Kora Bu’uressaa Adda Dimokiraatawaa Oromoo (ADO) sochii politikaa Oromoo haaraya dhugoomsuu keenya labsina. Sochiin haarayni kunis, kan haqa Oromoo fi saboota Itophiyaa maraaf falmu ta’a. Tarkaanfiin fudhanne kun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti boqonnaa haaraya saaqa. Kana qofa osoo hin taane, empayerummaa Itophiyaa hundeedhaan buqqisee sirna federalummaa demokraatawaadhaan bakka buusuu akeekkata.